Uumamni kunStingrayjedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii midhaan irratti nyaannu diriiraadha. Garuu akka eelee fi sahanii san gabaabaa miti. Qurxummiin kun bishaan oowwa qabu filata. Akkasumas bishaan akkaan gad dhooqatu keessa, lafatti gad dhihaatee jiraata. Sanyiin uumama kanaa hanga 60 akka ta’us qorannoodhaan bira gahamee jira. Sanyiin jahatamman kunniin guddina, bocaa fi amala garagaraa qabu.